Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny Samsung Galaxy Watch | Androidsis
Amin'ny fitaovana Android dia mora ny maka pikantsary miaraka amin'ny filaharan'ny bokotra finday, fa izany koa dia mitranga ary mitranga amin'ny Tizen ao amin'ny Samsung Galaxy Watch. Ny famantaranandron'ny marika fanta-daza dia ahafahanao maka pikantsary raha te hitahiry izay miseho eo amin'ny tontonana ianao amin'izany ora marina izany.
Ny famantaranandro marani-tsaina rehefa mandeha ny fotoana dia nahazo fanavaozana, maro amin'izy ireo no manatsara anao amin'ny lafiny sasany. Toy izany koa ny Galaxy Watch, famantaranandro sarobidy izay mendrika ny hanana ho an'ny mihoatra ny famantaranandro amin'ny alàlan'ny fananana asa fanampiny bebe kokoa amin'ireo mpifaninana aminy.
Samsung dia nanetsika ny safidy maimaimpoana haka fakantsary amin'ny Samsung Galaxy Watch, somary manahirana ny fizotrany amin'ny voalohany, na dia tsio-drivotra aza ny zava-drehetra. Ho an'ity dia mila fahaizana kely ianao amin'ny voalohany ary ho afaka hizara ireo valiny ireo amin'ny findainao ianao.
Mba haka pikantsary amin'ilay efijery kely an'ny Galaxy Watch tokony hataonao amin'ny fomba manaraka ity:
Alefaso ny efijery an'ny Samsung Galaxy Watch
Tano mafy ny bokotra ambany eo amin'ny sisiny ankavanan'ny famantaranandronao ary miaraka amin'izay dia ahosotra mitsivalana ny rantsan-tànanao avy eo ankavia mankany amin'ny ilany ankavanana
Raha vantany vao manao an'io ianao dia hampiseho aminao ny sary miaina ny fisamborana noforonina tamin'io fotoana io, ny fakana an'izay nosokafanao tamin'io fotoana io, ilay interface voalohany na ilay tianao aseho rehefa zaraina
Ny fampiharana sasany amin'ny Samsung Galaxy Watch dia tsy mamela pikantsary, noho izany dia hiasa amin'ity tranga ity amin'ny interface sy amin'ny fampiharana sasantsasany, ny sasany izay miala an-tanindrazana ity. Ny fizarana dia azo zaraina amin'ny Galaxy Watch mankany amin'ny findaintsika miaraka amin'ny safidy "Copy to phone".
Ny Galaxy Watch dia iray amin'ireo famantaranandro marani-tsaina izay manana safidy maro rehefa mampiditra Tizen amin'ny maha rafitra anao ary lasa tena mahaliana izany. Mazava ho azy, ny lahasa mahazatra indrindra dia tsy maintsy ampiana miandalana amin'ny fanavaozana isan-karazany azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny Samsung Galaxy Watch